May 2013 - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
## လမ်းခွဲခြင်းသီအိုရီ ##
Phyu Lwin May 26, 20133Comments
ကောင်မလေး။ ။ “နင့်ကို ငါ့ဘ၀ထဲက ဘယ်လို ထုတ်ပစ်နိုင်ပါ့မလဲ …။ ငါ့ဘေးနားက အရာရာက အားလုံးနီးပါး နင်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်….။
ဆင်တူဝယ်ထားတဲ့ Handset, key chain ပြီးတော့ ဆင်တူအကျီင်္လေးတွေ… နင်ပို့ပေးနေကျ အမှတ်တရ ကဒ်ကလေးတွေ… အမြတ်တနိုးနဲ့ နင်ဝယ်ပေးထားးတဲ့ အရုပ်တွေ … နင့်လက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့ စာအိတ်ပေါင်းများစွာ….. တူတူလျှောက်ဖူးတဲ့လမ်းတွေ … စားခဲ့ဖူးတဲ့ဆိုင်တွေ … သွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာတွေ ………..
ဒီအမှတ်တရတွေ ငါ့ဘေးနားမှာ ရှိနေသရွေ့ …… ငါ နင့်ကို ဘယ်လို မေ့ပစ်နိုင်ပါ့မလဲဟင် ?????”
ကောင်လေး။ ။ “အမှတ်တရပစ္စည်းတွေဆိုတာ ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်ရင် ပျက်စီးသွားတာပါပဲ ….။ အဲဒါတွေ ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်တောင်မှ ……… ချစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားက ….. မင်းကို ငါ့နှလုံးသားထဲက ထွက်သွားခွင့်မပေးခဲ့ဘူး…..။
ငါ့အတွေးထဲမှာ …. မင်းရှိနေသမျှတော့ ……. ငါအသက်ရှင်နေသရွေ့ မင်းကို မေ့ပစ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ …”
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် …….. ရှေးရေစက်မပါတဲ့ အချစ်တစ်ခုကတော့ ဆုံဆည်းခွင့်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့်ခွင့်မရှိတဲ့ မိုးပေါ်က ကြယ်တစ်ပွင့်လိုပဲ ။
ရင်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အမြဲထည့်ထားပြီး သူ့နဲ့ထာဝရအဝေးမှာ ရပ်တည်ရတာလောက် စိတ်ပင်ပန်းမှုမျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး….။
ဘယ်လိုလမ်းခွဲမှုမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် …. ကျန်ခဲ့တဲ့သူရော.. ချန်ထားရစ်သူပါ …. ဒဏ်ရာတွေ ဗရပွနဲ့ပါပဲ … ။ အပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုတစ်ချို့နဲ့ ရင်ထဲက ဒဏ်ရာတွေကို ၀ှက်ထားတတ်ကြပေမယ့် ….. အချိန်တော်တော်ကြာ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ သံယောဇဉ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ်မေ့ပစ်နိုင်လောက်အောင် အခွင့်အရေးမပေးတတ်ဘူး ……။
အသေးအဖွဲပြဿနာလေးတွေအတွက်နဲ့တော့ လမ်းခွဲဖို့ဆိုတဲ့စကားကို လွယ်လွယ်မပြောသင့်ပါဘူး…။ ဒါပေမယ့်လည်း အချိန်တွေအကြာကြီးယူပြီး ဖြစ်တည်လာတဲ့သံယောဇဉ်ဆိုတာ …… တစ်ရက်ကလေးနဲ့ ပြတ်တောက်သွားလောက်အောင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှားတတ်ကြတယ်…။ သံသယတွေ ၀င်တတ်ကြတယ်..။ အဲလိုနဲ့ပဲ မထင်မှတ်ထားဘဲ … တစ်သက်လုံးမဆုံနိုင်လောက်အောင် လမ်းခွဲကြရတတ်တယ် …။ နောက်ဆုံးတော့ ……. တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထာဝရသတိရနေရင်းနဲ့ပဲ … နောင်တဆိုတာ တစ်သက်လုံးအတွက် အဖော်ဖြစ်လာခဲ့တတ်တယ်…။ လွမ်းလိုက်တာ လို့ပြောခွင့်မရှိတော့တဲ့ ကိုယ်စီဘ၀တွေမှာ … မေ့မရခြင်းက ကြီးစိုးလာခဲ့သလို… သတိရခြင်းတွေပဲ လွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်….။
ဆုပ်ကိုင်မိပြီးမှ ပြန်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ လက်တစ်စုံက ဘယ်လောက်တောင် ထိရှခံစားရမလဲဆိုတာ ကြိုတွေးမိခဲ့မယ်ဆိုရင် လမ်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို လွယ်လွယ်ပြောထွက်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး …။
Phyu Lwin May 08, 20135Comments
အပေးအယူများလှတဲ့ အပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုတွေထဲ ………
ရယူလိုမှုမရှိတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ခင်မင်မှုတွေ ရစ်ပတ်ခဲ့ကြတယ်……………။
အတ္တတွေကြားက ဂုဏ်ပကာသနတွေကြားမှာ ……
ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကို မေ့ထားလို့ ……..
ဓနငွေကြေးတွေ တိုင်းတာတတ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲ
ကျော်ကြားမှုတွေ လုယက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ရိုးသားတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေခဲ့ကြတယ် …………။
♫ ♪ ♥ ♫ ♪ ♥ ♫ ♪ ♥ ♫ ♪ ♥
ကျမအတွက်ဆိုဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေတိုင်းမှာ …..
ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင်လို့ ………………
ပန်းခင်းလမ်းတစ်ခုကို အတူလျှောက်လှမ်းဖို့ ……..
# ♥♥♥ မောင် ♥♥♥ # Love Poems
Labels: ♥♥♥ မောင် ♥♥♥, Love Poems